adeegga doorashada dhalista darafkeeda
saa'idka Rolling ku yimaadaan noocyo kala duwan oo nooc, qaabab iyo dhinacyada. Si aad u qorshayso heshiis dhalista rogid waxaa lagama maarmaan ah in ay doortaan nooca dhalista ku haboon iyo si loo ogaado size a dhalista ku haboon. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka dhalista ah uusan ka kooban yahay oo kaliya ee saa'idka rogid laakiin waxaa ka mid ah qaybaha la xiriira saa'idka ah sida usheeda dhexe iyo guryaha. jilciyaha sidoo kale waa qayb aad u muhiim ah oo heshiis dhalista, sababtoo ah waxa ay leedahay si looga hortago in ay xirtaan iyo difaaco daxalka si qaadista geeyo karo waxqabadka buuxa. Oo ayan ku jirin, kuwaas oo, shaabaddii sidoo kale waa qayb aad u muhiim ah, waxqabadka taas oo muhiimada ay muhiim u tahay nadaafadda ee jilciyaha. Waxaa intaa dheer, dhowr dhinacyo kale oo in la tixgeliyo, sida qallalku ku haboon iyo ansixin gudaha ama loader sita, qalabka haysta iyo hababka loo xirxiro iyo ka saarida, iwm
Si aad si guul leh ugu abuuranto qiyam macaamiisha oo dalbaday in faham qoto dheer oo waxa ay macaamiishu si gaar ah u baahan tahay iyo waxay u baahan yihiin ee la xiriira badeecada iyo adeegyada. Macaamiisha sameeyo taxane badan oo waxyaabaha sida baabuur, qalabka guriga, bambooyin iyo matoorrada korontada leeyihiin shuruudo gaar ah oo ba'an oo la xiriira technology, tayada, saadka iyo qiimaha. waxaanu kuu soo bandhigi xal caadiga ah iyo habka kuu ogolaada in aad si loo wanaajiyo kartida iyo, isku mar, yareeyo kharashka guud.
Our awood u leh inay si dhow ula shaqeeyaan macaamiisha - wax ku ool noqoto lamaanahaaga design a - waa sal u tahay guusha Viproce ee. Injineerada Our fahamsanahay in codsiga kasta waa mid gaar ah. Waxaan leenahay taariikh dheer oo bixiya xalal hal abuur iyo kharash-ool ah, kaas oo ku siin naqshado aad ku laayeen tartan.
Viporce si joogto ah loogu saa'idka gaar ah meel ka durugsan baaxadda line noo soo saarka caadiga ah. Haddii yar yar ama waaweyn, oo leh sifooyin gaar ah, ama qalabka gaar ah ka dhigay, aan lahayn waayo-aragnimo ah si aad ugu qorshayso xal si mug leh.
Qaar ka mid ah xal u xad-dhaaf ah, waxaannu loogu talagalay waxaa ka mid ah 1mm in dhexroor 8 "usheeda dhexe, kartida si ay u 25,000 lbs. [11.340 kg], heerkulka ka -320 ° F 600 ° F [-195 ° in 315 ° C], soo-gaadhista kiimikada iyo iska caabin UV. More si caadi ah, injineerada our la qorsheeyo waxqabadka mug leh, waxyaabaha isticmaalka ama inay meel shuruud gaar ah dalbaday by habka codsiga ama kiniisadda.
Yaree Your dhoofinta iyo Qiimaha
Certificate of asal registratio n
Shahaadada Guud ee asal ahaan, diiwaangelinta iyo soo saarista (C / O), GSP, shahaado ka soo jeedo, diiwaangelinta iyo soo saarista (Forma, FORME)
Translation, mail reply, gorgortanka ganacsi
Tayaasha, jiidaya golaha wasiirada, samaynta warqadaha kastanka lagu dhawaaqo, caadooyinka lagu dhawaaqo iyo warqadaha kastanka ansixin
record Online, waraaqaha, xaqiijinta
dib u eegis Document, entry macluumaad, canshuur celinta lagu dhawaaqo